Arcade jeux Lalao Mahazo tombony avo be ny Kylin Thunder - Lalao mifono trondro avo. Manamboara rindrambaiko lalao. Kitapo tsara.
Home » Product » Arcade jeux Lalao Mahazo tombony avo be ny Kylin Thunder
Profit ambony Fishing Arcade Game miaraka amin'ny mitazona avo
Ahoana ny hilalao Arcade jeuj et Lalao Faha-tombom-barotra ambony
In Fishing Arcade Game Tombontsoa avo Kavin-kotroka isan-karazany ny trondro azo hazina, izy rehetra dia samy manana ny lanjany samihafa. Mampitombo ny isa isa ny mpilalao amin'ny isa sy ny sandan'ny trondro azony mandritra ny lalao.
Ny lehibe Tombontsoa avo Kavin-kotroka ny lalao dia apetaka amin'ny endri-javatra sy lalao mini. Zava-dehibe izany hampiasaina amin'ny fanomezana ilany mpilalao kokoa ny mpilalao mba hahazoana teboka maro kokoa, ny mety hisian'ny fandresena bebe kokoa.
Ireo endri-javatra hita ao Fishing Arcade Game Tombontsoa avo Kavin-kotroka ahitana:
Rehefa Kylin dia voadona am-pahombiazana, havoaka ny rojo mba hisambotra azy ary hiditra ny Fomba Fifaninanana. Mandritra ny tolona, izay mamely rehetra ateraky ny dragona dia hanana isa bebe kokoa. Raha ny Kylin tratra io dia hanomboka fanafihana tezitra be kokoa ary hahazo loka ambony kokoa ny mpilalao.
2. Thaly Whale - Boss
Rehefa tratra ny trozona dia misy onjam-pandehanana trozona maro dia hanampy ny mpilalao mba hisambotra trondro trondro maro.
3. Trondro Devoly - Boss
Rehefa Trondro Devoly tratra. Hanampy ny mpilalao haka trondro trondro maro araka izay tratra.